Maaha Haaland, Mbappe, Kane & Aguero - Owen Hargreaves Oo Farta Ugu Fiiqay Manchester United Weeraryahanka Saxeexiisa Ay Ku Helayaan Horyaalka Premier League - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaaha Haaland, Mbappe, Kane & Aguero – Owen Hargreaves Oo Farta Ugu Fiiqay Manchester United Weeraryahanka Saxeexiisa Ay Ku Helayaan Horyaalka Premier League
Maaha Haaland, Mbappe, Kane & Aguero – Owen Hargreaves Oo Farta Ugu Fiiqay Manchester United Weeraryahanka Saxeexiisa Ay Ku Helayaan Horyaalka Premier League
April 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Owen Hargreaves ayaa kooxdiisii hore ee Manchester United u tilmaamay laba weeraryahan oo ay tahay in ay lasoo saxeexdaan midkood si ay ugu guuleysan karaan horyaalka Premier League, mana aha kuwii lala xidhiidhinayey ee Erling Haaland, Harry Kane, Mbappe ama Sergio Aguero.
Manchester United oo xilli ciyaareedkan kaalinta labaad ee horyaalka ku jirta, ayaa waxay rajaynaysaa inay ku guuleysato Europa League oo semi-finalka ay isku beegmeen AS Roma, waxaana usbuucyo kaddib u bilaabmi doona isku diyaarinta xilli ciyaareedka dambe.
Red Devils oo ka liidata afka hore ee gool-dhalinta ayaa waxay ku jirtaa kooxaha danaynaya in ay lasoo saxeexdaan weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland, halka dhaliyaha Tottenham ee Harry Kane oo la tuhmayo in uu doonayo in uu ka tago Spurs ay isagahan shiishka ku hayaan.
Laakiin labadan ciyaartoy ee Haaland iyo Kane ayaa midkiiba ugu yaraan ku kacayaa lacag dhan £150 milyan oo Gini, taas oo ay waqtigan adag tahay in ay bixiso Red Devils.
Si kastaba, Owen Hargreaves ayaa kula taliyey kooxdiisa hore, in xalka ugu habboon aanu ahayn in lacagta intaas le’eg ay kasoo bixiyaan ciyaartoydaas, laakiin ay isku dayaan in ay heshiiska u kordhiyaan Edinson Cavani muddo sannad kale, lacagtii ay ku bixin lahaayeen saxeexa weeraryahannadana ay ku bixiyaan meelo kale.
United oo waqtigan wada-hadallo kula jirta Edinson Cavani oo ayd oonayso in ay sannad kale u kordhiso heshiiska, ayuu Owen Hargreaves usoo jeediyey in ay ka shaqayso sidii ay u hirgelin lahayd sannadkaas heshiiska ah, kaddibna ay lasoo saxeexato Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ah ama Raphinha oo garabka uga ciyaara Leeds United.
Hargreaves waxa uu tilmaamay in ciyaartoyda afka hore ee Mason Greenwood, Marcus Rashford iyo Anthony Martial oo lagu daray Bruno Fernandes ay ka caawin karayaan inay goolal dhaliyaan, laakiin garabka weerarka oo ay laacibiin khatar ah ku helaan ay ka caawin doonto in ay sare ugu ruqaansadaan horyaalka oo ay la tartami karaan Man City.